Ahoana ny fanesorana feo amin'ny horonan-tsary amin'ny iPhone | iPhone News
Ahoana ny fanesorana ny feo amin'ny horonan-tsary amin'ny iPhone
Maro ny antony mety hanerena antsika, na ilana azy esory ny feo amin'ny video amin'ny iPhone alohan'ny hizarana azy. Raha te hahalala ny fomba rehetra hanesorana ny feo amin'ny horonan-tsary amin'ny iPhone ianao dia manasa anao aho hanohy hamaky.
4 Mangina Videos
5 Mangina: Esory ny feo feo
6 Meteza ny horonan-tsary
Indraindray, ny vahaolana tsotra indrindra dia hita ao amin'ny rafitra fiasana mihitsy. Ary, amin'ity tranga ity, tsy maningana izany, satria avy amin'ny fampiharana Photos dia afaka esory ny feo amin'ny horonan-tsary rehetra izay ananantsika ao amin'ny tranomboky.
Ny olana eo anoloantsika dia izay ny fiovana mitranga amin'ny lahatsary, kopia mitokana dia tsy noforonina hampiharana ny fanovana.
izany hanery antsika hamadika ny fiovana raha vao nizara ilay vidéo tsy misy feo, raha mbola mila mitazona azy.
Para esory ny feo amin'ny video Avy amin'ny fampiharana Photos dia tsy maintsy manao izao manaraka izao isika:
Voalohany indrindra, tsy maintsy mifidy horonan-tsary izay tiantsika hanesorana ny feo.
Manaraka, tsindrio ny bokotra Ovay.
Manaraka, eo an-tampony ankavia, tsindrio ny kisary volume.
Raha te hitahiry ny fanovana dia tsindrio ny Ok.
iMovie no tonian-dahatsoratr'i Apple ho an'ny mpampiasa iOS rehetra. tena malalaka. Amin'ny alalan'ity fampiharana ity dia afaka mamorona karazana horonan-tsary rehetra amin'ny alàlan'ny môdely samihafa atolony ho antsika isika.
Afaka manao izany koa isika mamoaka ny eritreritsika ary ampiasao ireo vokatra samihafa, fifindrana, hira ary hafa izay omeny antsika.
Tahaka ny ahafahantsika manampy mozika, dia mamela antsika koa izany manova ny volume video, anisan'izany ny safidy hanesorana azy ireo tanteraka.
Raha tsy nametraka ny fampiharana isika dia afaka alaivo avy amin'ny rohy manaraka.
Ireto ny dingana hanesorana ny feo amin'ny horonan-tsary amin'ny iPhone na iPad miaraka amin'ny iMovie.
Raha vantany vao manokatra ny fampiharana izahay dia tsindrio Mamorona tetikasa / sarimihetsika.
dia mifantina ny horonantsary izahay izay tiantsika hanesorana ny feo ary tsindrio eo Mamorona sarimihetsika.
dia tsindrio ny video mba hidirana amin'ireo safidy fanovana natolotry ny iMovie.
Amin'ny dingana manaraka, tsindrio ny bokotra Volume ary atsipintsika miankavanana ny bara, mba hampidina ny feo.
Ary farany, tsindrio ny bokotra vita, hita eo an-tampon'ny ankavia amin'ny fampiharana.
Rehefa avy namorona ny sarimihetsika miaraka amin'ny lahatsary tsy misy feo, tonga ny fotoana hizarana izany. Avy amin'ny pejin'ny tetikasa iMovie dia afaka zarao mivantana ny video miaraka amin'ny fampiharana hafatra tiana.
Raha mila tehirizo ao amin'ny ordinaterantsika ilay video, rehefa manindry ny bokotra fizarana, dia tsy maintsy manindry ny bokotra Save video isika.
Raha tsy mampiasa iMovie ianao hanovana horonan-tsary amin'ny fitaovanao dia azonao ampiasaina izay mpamoaka horonantsary hafa ampiasainao tsy tapaka.
Izay mpamoaka horonantsary manaja tena, ahitana ny mety mba hahafahana mampangina tanteraka ny horonan-tsary, manatsara ny feo, manolo ny track audio amin'ny hafa...
WhatsApp no ​​sehatra mahazatra mahazatra hizara horonantsary, horonan-tsary izay, raha tsy voarindra tsara ny fampiharana, fenoy ny toerana fitahirizana ny fitaovanay. Lohahevitra hafa anefa io.
Ny fampiharana hafatra an'ny Meta dia nahitana herintaona mahery kely lasa izay, fiasa vaovao mifandraika amin'ny horonan-tsary izay mamela antsika hampanginana azy ireo alohan'ny handefasana azy ireo.
Raha mahazatra mampiasa ity sehatra ity ianao hizarana horonan-tsary ary te hanala ilay feo ianao dia hasehoko anao ny fomba hanaovana azy.
Rehefa nosokafanay ny fampiharana dia mandeha any amin'ny chat izay tiantsika hizarana ny horonan-tsary tsy misy feo.
Haseho avy eo ny fijerena ilay horonan-tsary. Ao ankavia ambony, ny kisary volume dia aseho.
Amin'ny fipihana io kisary io, hesorina amin'ny feo ny feo raha mbola hihena ny haben'ny rakitra farany.
Raha handefa ny horonan-tsary tsy misy feo dia tsindrio ny bokotra mandefa.
Raha tsy ny hizara ny horonan-tsary amin'ny alàlan'ny WhatsApp no ​​tanjonay, fa te hampiasa fampiharana hafa izahay dia afaka manohy mampiasa WhatsApp sy araraoty ity fampiasa ity.
Mba hanararaotra ity fampiasa WhatsApp ity dia azonao atao ny mandefa ilay horonan-tsary amin'ny fianakavianao na namanao manala ny feo araka ny efa nambarako tetsy ambony.
Manaraka, miditra amin'ny chat izay nizaranay azy izahay, tsindrio ny video ary ao amin'ny menio midina Tsindrio ny Save video.
Amin'izany fomba izany dia hanana isika ny horonan-tsary tsy misy feo ao amin'ny tranomboky vonona ny hizara amin'ny fampiharana hafa.
Araka ny filazan'ny anarany, ny fampiharana Mute Videos dia ahafahantsika manao izany esory ny feo amin'ny horonan-tsary rehetra izay notehirizinay tao amin'ny tranombokin'ny fitaovanay.
Saingy, ho fanampin'izany, ary tsy toy ny fampiharana rehetra nasehoko tamin'ity lahatsoratra ity, dia mamela antsika ihany koa esory ny ampahany amin'ny feo amin'ny horonan-tsary.
Azo ampiasaina ity application ity ho anao misintona maimaim-poana, tsy ahitana doka na fividianana in-app. Mila iOS 11 na ambony ity fampiharana ity ary mifanaraka amin'ny Mac miaraka amin'ny processeur Apple M1.
Mangina: Esory ny feo feo
Miaraka amin'ny Mute Up, tsy vitan'ny hoe mamela antsika hanala tanteraka ny feo amin'ny horonan-tsary, fa koa mamela antsika hampitombo izany ho in-10.
Mba hampitomboana ny haavon'ny feo na hanafoanana azy dia tsy maintsy manetsika ny baoritra feo miankavanana na miankavia tsirairay avy.
Mute Up dia misy ho anao misintona maimaim-poana, tsy ahitana fividianana na doka. Mitaky iOS 14.1 na aoriana izy io ary mifanaraka amin'ny Mac ampiasain'ny processeur M1 an'ny Apple.
Mangina: Esory ny feo feomaimaim-poana
Meteza ny horonan-tsary
Miaraka amin'ny fampiharana Mute Video dia fampiharana tsotra ahafahantsika manaisotra ny feo amin'ny horonan-tsary rehetra voatahiry ao amin'ny fitaovantsika. Ny fampiharana dia azo alaina ho anao Misintona maimaimpoana ary misy doka.
Raha mampiasa ny fividianana in-app izahay dia hesorinay ny doka. Ity fampiharana ity mitaky iOS 9 na aoriana ary mifanaraka amin'ny Macs tantanana miaraka amin'ny processeur Apple M1.
Video Mangina - Video Manginamaimaim-poana
Ao amin'ny App Store dia afaka mahita rindranasa bebe kokoa izahay manala na manatsara ny feon'ny horonan-tsary, saingy manana olana lehibe izy ireo satria manery anay handoa famandrihana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ahoana ny fanesorana ny feo amin'ny horonan-tsary amin'ny iPhone
Ny iPhone 14 dia efa manana endrika ary ny singa voalohany dia ao amin'ny orinasa
Maherin'ny antsasany amin'ireo mpanjifa Apple Music no mampiasa feo spatial